10 Day Njem Site Florence Site Train | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Day Njem Site Florence Site Train
Florence bụ ihe ịtụnanya ebe ọnụnọ na e nwere tọn ime. ma, ma ọ bụrụ na ị na-achọ ka ịmalite karịrị nke a isi obodo, anyị nwetara gị kpuchie. E nwere ụfọdụ ịtụnanya ebe nleta na ndị dị nnọọ a ụgbọ okporo ígwè n'ebe Florence. ebe a na- 10 Day Njem Site Florence Site Train n'ihi na ị na-enwe!
Okporo ígwè Transport bụ ihe kasị Environmentally Enyi na Enyi Way To Travel na nkena-isiokwu e dere na nzube ịkụziri banyere Train Travel na e mere site Save A Train, Ndị dị ọnụ ala Train Tickets weebụsaịtị Na The World.
1. Day Njem Site Florence Site Train: Pisa
Pisa bụ na ọtụtụ ndị njem ịwụ anatara ruru ya ma ama hiere Tower, Katidral nke Santa Maria Assunta na ndị ọzọ dị ịrịba ama na saịtị. Ma obodo ya, obosara na kewara ekewa site Arno River, bụ uru a ụbọchị njem na ya! There are a good number of obere ngosi ihe mgbe ochie lelee, yana gardens. The Palazzo Blu nwekwara esetịpụ monographic ngosi nke dị mkpa n'oge a artists (Chagall, Miro na kasị nso nso Toulouse Lautrec). Na-eme ịchọ ikpeazụ mural rụtụrụla site Keith Haring, akpọ Tuttomondo.
Ị nwere ike na-atụ anya ka na-eje ije gị na njem. Ya mere, cheta na ọ bụrụ na ị na-claustrophobic ma ọ bụ egwu nke elu-arịgo na hiere Tower ghara ụda na-adọrọ mmasị gị, ma ọ bụ maa kwesịrị-ahụkwa ụzọ!
Livorno ka Pisa Ụgbọ oloko
Lucca ka Pisa Ụgbọ oloko
Arezzo ka Pisa Ụgbọ oloko
Otu n'ime ndị kasị ewu ewu na Day Njem Site Florence Site Ụgbọ oloko bụ Siena. Ọ bụ ma ama n'ihi na ya Palio, nke bụ a ịnyịnya ọsọ ahụ na-agba ọsọ site na dokwara ama Piazza del Campo. Ọ na-mara maka ya mara mma ochie ije n'etiti ndị ọzọ ihe. Siena bụ obodo oge ochie jupụtara UNESCO ụwa nketa saịtị na bụ uru a nleta!
3. Day Njem Site Florence Site Train: Livorno
Nke a bụ otu n'ime ndị kasị zuru okè Day Njem Site Florence Site Train ndị na-achọ ma n'ụsọ oké osimiri na ndị obodo. Ọ bụghị dị ka akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ omenala dị ka ndị ọzọ Tuscan obodo. Otú ọ dị, ọ bụ otu n'ime Italy si omenala seaside eme na obodo nta. Ọ bụ ebe kacha mma iji zuru ike na inyocha onwe gị ijeụkwụ, na ihe maka onye ọ bụla.
Arezzo ka Livorno Ụgbọ oloko
Pisa ka Livorno Ụgbọ oloko
Florence na Livorno Ụgbọ oloko
Siena ka Livorno Ụgbọ oloko
N'agbata Florence na Siena, San Gimignano bụ otu n'ime ndị kasị ọmarịcha obodo nta dị Tuscany. ọ na-etu ọnụ 14 ochie elu, cobblestone n'okporo ámá kpafuo gburugburu na-enwe mmasị ochie ochie ije nke ụlọ. Ọ bụ nnọọ dị ka otu awa n'ebe Florence.
Lucca ka San Gimignano Ụgbọ oloko
5. Day Njem Site Florence Site Train: Bologna
Ọ bụ ezie na mpụga nke Tuscany na a bit ọzọ pricey iru (ma na ị chọrọ na-nnọọ ngwa ngwa mpaghara ụgbọ okporo), ngwa ngwa ụgbọ okporo ígwè na-ewe gị ka Bologna na nanị ihe karịrị ọkara otu awa. (Jide n'aka na-na-gị tiketi site Save A Train n'ezie!) Bologna bụ otu n'ime ndị kasị underrated obodo na Italy na bụ nnọọ mma hotspot na anyị 10 Day Njem Site Florence Site Train. N'agbanyeghị ya mara mma akụkọ ihe mere eme center, oriri omenala, na na; ma ntụsara, ọ na-na ọtụtụ ndị anaghị eme njem nleta na-emebu Venice Florence Rome ụzọ.
Nke a bụ ihe ihere ka e nwere ọtụtụ ihe na-eme na Bologna si arịgo ochie ụlọ nche fun nri tours, na ọ na-eme a oké isi n'ihi na ịgagharị ọzọ na-adọrọ mmasị na mpaghara. Anyị nọrọ a izu n'ebe April na hụrụ n'anya na mix nke nghọta na grittiness na, n'ezie, niile na-atọ ụtọ ọhụrụ pasta.
A obere obodo dị na Chianti region, Greve bụ a zoro ezo mkpuru na otutu ihe mere eme, ọdịnala, na ọtụtụ wine omenala. Greve bụ a zuru okè ụbọchị njem si Florence inyocha na kpagharịa gburugburu ya ọrụ aka ahịa, cafes na kọfị ụlọ ahịa. Ọ bụrụ na ị na-achọ a nọrọ jụụ ụbọchị, Greve nwere ike ịbụ gị zuru okè oke.
7. Day Njem Site Florence Site Train: Saturnia
Saturnia bụ a spa obodo Tuscany na North Central Italy. The zuru okè ebe iji zuru ike na tụsaratụ. The thermal iyi dị ọkụ in Saturnia are sulfurous springs in the middle of a valley and they are well known for their therapeutic properties, àjà ntụrụndụ na nke ọma ịbụ site n'imikpu ná mmiri niile ụbọchị.
Ozugbo tọrọ ntọala site na Etruscans n'elu a nkpoda ugwu mere nke tufa (mgbawa ugwu ash nkume). The obodo nke Orvieto adahade n'ike n'ike n'elu tuff ọnụ ọnụ ugwu na-agwụ agwụ site nzere mgbidi wuru nke otu nkume akpọ Tufa. The isi na-adọrọ mmasị na-apụghị na-aga-adịghị ahụ anya bụ Duomo na Papal obibi. Nke a quaint obodo bụ zuru okè n'ihi na-awagharị awagharị na na-ekiri ya ije.
Florence na Orvieto Ụgbọ oloko
Siena ka Orvieto Ụgbọ oloko
Arezzo ka Orvieto Ụgbọ oloko
Perugia ka Orvieto Ụgbọ oloko
9. Day Njem Site Florence Site Train: Arezzo
Ọ bụrụ na ị na-na Florence n'ihi na ị hụrụ n'anya Renaissance art, see n'elu Arezzo, otu awa ma ọ bụ otú pụọ na ụgbọ okporo ígwè, maka a dị iche iche n'ọnọdụ. Francesc Piero, onye osise nke Duke na Duchess nke Urbino ị pụrụ ịhụ na Uffizi, na-ese na-elu uka n'obodo a na chọọchị nke San Francesco. The mgbagwoju fresco okirikiri, na-anọchi anya Story of Ezi Cross, bụ otu n'ime ihe ndị kasị akpa nke n'oge Quattrocento, na nke onye na-ese na-arụ ọrụ ya maniacal echiche nke uwa (dabere na otu isi n'ọnọdụ), bi site serene ọgụgụ na egg ekara isi.
Ndị ọzọ nke obodo na-enye ezuru maka a siri ike ọkara ụbọchị nleta (ma ọ bụ karịa). Ọ bụrụ na ị na-enwe ìgwè mmadụ, abịa na akpa izu ụka nke ọnwa, mgbe ọ fọrọ nke nta dum obodo center na-aghọ a gigantic ochie ahịa.
Florence na Arezzo Ụgbọ oloko
Perugia ka Arezzo Ụgbọ oloko
Bologna ka Arezzo Ụgbọ oloko
Siena ka Arezzo Ụgbọ oloko
Olee otú anyị pụrụ kwụsị Venice na anyị 10 Day Njem Site Florence Site Train ndepụta? Venice bụ otu n'ime ndị kasị ihunanya na ewu ewu na ebe na Italy. Featuring puku ọwa mmiri, obí eze na gothic style ụlọ. Venice bụ n'ihi na n'aka otu n'ime ihe ndị kasị mma n'obodo ị ga-ahụ. Ezie na ọ pụrụ ịbụ otu n'ime ndị kasị oké ọnụ. A ụbọchị njem nwere ike ịbụ otu nke kasị mma nhọrọ ma ọ bụrụ na ị na-adịghị na a uko ego.
Njikere nne Mmetụta ihe ụfọdụ anya gị ịwụ ndepụta? Anyị na-atụ na anyị 10 Day Njem Site Florence Site Train ndepụta enyeworo gị aka warara ya ala. Cheta na Save A Train na-enye na-azụ tiketi na-enweghị zoro ezo na-akwụ ụgwọ, na ị nwere ike n'akwụkwọ n'ime nkeji!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “10 Day Njem Site Florence Site Train” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/day-trips-from-florence/ የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)